Waa maxay xeerarka nadaafadda-fayadhowrka ee ay tahay in istuudiyaha tattoo lagu dhaqo? | Tattoo
Waa maxay xeerarka nadaafadda-fayadhowrka ee ay tahay in istuudiyaha tattoo lagu dhaqo?
Miyaad leedahay tattoo ama istuudiyaha wax dalooliya mise waxaad ka shaqeysaa micropigmentation? Markaa waxaad u baahan tahay inaad ogaato xeerarka nadaafadda fayadhowrka ee looga baahan yahay xarun kasta si shaqadu mar walba u noqoto 100% dammaanad. Shaki kama qabno inaad u hoggaansan tahay dhammaan tillaabooyinka, laakiin ma xuma inay xusuusato iyaga.
Dad aad u badan ayaa taga xarumo tattoo ama istuudiyaha si ay u awoodaan inay noloshooda ama xusuustooda ku qabsadaan maqaarkooda. Laakiin si ay natiijadu u noqoto mid ugu faan iyo inta u dhaxaysa tallaabooyinka nadaafadda ee ugu fiican, xaruntu waxay u baahan tahay inay raacdo dhowr tallaabo si aan dhammaanteen farxad uga tagno shaqada la qabtay iyo guud ahaan deegaanka. Ma rabtaa inaad ogaato waxay yihiin?
1 Waa maxay heerarka iyo tallaabooyinka fayadhowrka ay tahay in istuudiyaha tattoo lagu dhaqmo
2 Farsamooyinka nadiifinta waa inaad ogaataa
3 Sida loo ogaado haddii farshaxan -gacmeedku u hoggaansan yahay heerarka nadaafadda
Waa maxay heerarka iyo tallaabooyinka fayadhowrka ay tahay in istuudiyaha tattoo lagu dhaqmo
Waxaa jira tallaabooyin badan oo lagu xisaabtamayo, laakiin shaki la'aan, waa inaan ku bilownaa kuwa ugu aasaasiga ah, kuwaas oo ah nadaafadda, taas oo ah, si xaruntayadu mar walba ammaan u tahay, kama boodi karno xeerarka nadaafadda caafimaadka iyo sharciga Sababtoo ah sidan oo keliya oo tixgelinaysa dhammaan shuruudahaaga, waxaan siin doonnaa nabadgelyo weyn dhammaan macaamiisheena laakiin sidoo kale annaga lafteena. Waa maxay shuruudaha aasaasiga ah?
Waxaan ku jirnaa daqiiqad nolosheena ah taas oo in gacmahaaga lagu dhaqo saabuun iyo biyo ayaa ka muhiimsan. Sidaa darteed, sidoo kale xarumaha tattoo ama istuudiyaha waxay ka badan tahay aasaaska.
Ka dib markaad maydho iyo gacmo nadiif ah oo dhammaystiran, waxaan gashan doonnaa galoofyada. Kuwani mar walba waxay noqon doonaan adeegsi keli ah.
Haddii ay dhacdo inaan qabno nabar nooc ah, waa inaan si fiican u daboolnaa, oo leh faashad, haddii ay suurtogal tahay, aan biyuhu ahayn Laakiin haddii aysan taasi suurtogal ahayn, markaa had iyo jeer way fiican tahay in dib loo dhigo fadhiga.
Isticmaal kasta ka dib, maaddadu waa inay maraan hab jeermis -dilis ama jeermis -dilis.
Waa inaad ku dartaa waxyaabo ilaaliya sida shaashadaha, goonnada ama wax kasta oo kale oo ilaaliya farshaxanka tattoo laakiin sidoo kale macmiilka laftiisa.
Farsamooyinka nadiifinta waa inaad ogaataa
Ka dib markaan aragno tallaabooyinka ugu badan ee ay tahay inaan qaadno si aan si wanaagsan uga faa'iideysanno shaqadayada, waa inaan xoogga saarnaa hababka nadiifintaku Marka ugu horreysa waa inaan ku sharadnaa waxa loogu yeero asepsis oo ka shaqeeya sida loo adeegsado tallaabooyinka nadaafadda ee saxda ah, ka hortagga jeermisyada in ay nolosheenna gaaraan. Laakiin markii aynaan garanayn inay halkaas joogaan iyo in kale, waxaan ku dhaqaaqi doonnaa antisepsis, taas oo ah farsamadda nadiifinta ugu saxsan ee dhammaan agabyada, maaddaama daawooyinka jeermis -diidka ay ka yimaadaan, taas oo sida walax ahaan, waxay macasalaamayn doonaan jeermisyada doonaya inay soo galaan qalabka shaqada.
Marka waxaas oo dhan, oo leh nadaafad wanaagsan sida aan nidhaahno, si fiican ayaa loo ilaalin karaa. Ha ilaawin inaad jeermi -dile, laakiin ma aha oo kaliya qalabkaas laakiin sidoo kale meesha aad ka shaqayso (hal mar maalintii ugu yaraan) iyo siyaabo kale sida fidiyaha ama alaabta guriga aad isticmaashid. Iyadoo aan la iloobin madhalaysnimada, oo iyaduna ah mid kale oo ka mid ah farsamooyinka ilaaliya nadaafadda oo iska ilaaliya dhammaan noocyada bakteeriyada, gaar ahaan maaddada u dhow xuubka xuubka. Tallaabooyinka iyo hababka ay tahay in si taxaddar leh loo fuliyo!
Sida loo ogaado haddii farshaxan -gacmeedku u hoggaansan yahay heerarka nadaafadda
Maanta ma adkaan doonto in la helo istuudiyaha tattoo oo si adag u hoggaansama tallaabooyinka iyo heerarka nadaafadda. Waa run in kuwan la cusboonaysiinayo sidaa darteed, dhammaan xirfadleyda waa inay ka warqabaan. Laakiin haddii aad tahay macmiil, waxaa fiican inaad mar walba booqato xarunta oo aad hubiso.
Xaqiiqdii waxaad halkaas ka heli doontaa dhammaan tilmaamaha suurtagalka ah iyo calaamado xaqiijinaya jawi ku habboon. La hadlida farshaxanka tattoo ayaa waliba ku siin doonta nabadgelyo. Waa inaad hubisaa in maaddada oo dhan ay tahay in la madhalaysto oo ay tahay mid la tuuri karo, marka lagu daro nadiifinta gacmaha iyo adeegsiga ilaalin ku filan iyaga iyo annagaba. Had iyo jeer naftaada ku rid gacmo wanaagsan!
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Tattoos » Waa maxay xeerarka nadaafadda-fayadhowrka ee ay tahay in istuudiyaha tattoo lagu dhaqo?
Miisaanka Weyn ee Weyn ayaa Saameeya Tattoo-ka: Sawiradan waa la muujiyaa